Home TORO FARANY AFRICAN Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography
Nohavaozina farany teo March 4, 2018
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny baolina kitra izay fantatry ny anarany manokana; "The Brute". Ny tantaram-pianakavian'i Victor Wanyama momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ireo tranga tsy fantatra izay tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny tantarany amin'ny maha-Keniana voalohany izay asongadina ao amin'ny Ligy Premier, saingy vitsy no mihevitra ny Bio Bio Victoriana izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Tany am-piandohana
Ny anarany feno dia Victor Mugubi Wanyama. Teraka tamin'ny andro 25 andro 1991 tany Nairobi, Kenya izy. Teraka tamin'ny ray aman-dreny nahantra, (Mr sy Mrs Wanyama) izay nahazo fahafahana hanao fanatanjahan-tena tatỳ aoriana.
Na dia teo aza ny fanombohan-janaka, dia mbola zazalahy tsotra iray izay nitarika an'ilay Afrikana malaza i Victor tamin'izy mbola kely "Cha baba na cha mama" AKA "Mama sy Papa Play" tahaka ny ambin'ireo mpinamana amin'ny fahazazany. Nandalo tamim-pahasahiranana be izy. Nandao ny tranon'ny saram-pianarana i Victor, ary indraindray tsy nandeha an-tongotra nandritra ny andro maromaro izy.
Tao anatin'ny fe-potoana hialana amin'ny zava-misy henjana dia nanomboka nivazivazy izy tamin'ny fivarotana vatsy kely mba hitazonana ny vatana sy ny fanahy tsy misy. Indraindray eny an-dalambe dia mahita andian-jiolahy manenjika ny polisy Kenyana izy.
Ny fiheverana ny baolina kitra dia tonga rehefa nijery sy nankasitraka ny fampisehoana baolina kitra Patrick Viera eo amin'ny sehatry ny lalao. Izany dia tonga ihany koa taorian'ny zokiny lahy ary avy eo mpilalao baolina teo an-toerana McDonald Mariga nanoro hevitra azy hanome baolina baolina. Raha mieritreritra ny hampivelatra vondrona mitovy aminy ho an'i Patrick Viera izay any amin'ny Keniana izy, dia nanapa-kevitra i Victor fa hanome baolina amin'ny baolina kitra amin'ny ray aman-dreniny hanohana azy amin'ny fepetra tokony hamita ny fianarany amin'ny ambaratonga faharoa. Na dia teo aza ny zokiny lahy voalohany nandray anjara tamin'ny baolina kitra, nihevitra ny ray aman-dreniny fa tsy manana hoavy sy antoka ao anatin'ny firenena ny asany.
Wanyama raha nandray toro-hevitra avy amin'ny ray aman-dreniny ary nanohana ara-bola ny rahalahiny dia nanohy nanatrika ny Sekolin'i Kamukunji High School, izay mametraka ekipa baolina kitra mahomby. Rehefa nivoaka ny lisea izy, dia nilalao niaraka tamin'ny JMJ Academy nandritra ny telo taona izy ka niaraka tamin'ireo mpikamban'ny Kenyana Premier League Nairobi City Stars.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Ny fahagagana
Ny fahagagana voalohany dia tonga tany amin'ny fianakaviany rehefa nahamarika ireo mpikaroka Soedoà Wanyama, McDonald Mariga, izay nandraisany anjara tamin'ny ekipa Swedish Helsingborg. Ny McDonald dia nanana fananganana tahirin-tsakafo tahaka ny rahalahiny, Victor ary ny klioban'ny Soedoà tiany. Ity ambany ity ny fahasamihafana misy eo amin'i Victor (ankavia) sy ny zokiny lahy (sary ankavanana).
Rehefa nahita ny tsy fanoloana an'i Mc Donald, ary rehefa nampahafantarina ny mety ho vitan'i Victor Wanyama any Kenya, dia nandefa scouts ry zareo mba haka azy any Kenya.
Ny Victor Wanyama voalohany nifindra tany Eorôpa dia tonga tao 2007 rehefa niaraka tamin'i Helsingborg club Helsingborg tao 2007 izay nilalaovan'ny rahalahiny McDonald Mariga baolina kitra. Taorian'ny nialàn'ny rahalahiny McDonald Mariga Serie A lafiny Parma Tao amin'ny 2008, dia niverina tany Kenya i Wanyama noho ny fiatoana kely. Nandritra io vanim-potoana io dia nalefa tany amin'ny Beerschot AC ny Ligy Belza izy. Nijanona tany izy nandritra ny fizaran-taona maromaro talohan'ny nifindrany tany Scottish gigantes, Celtics.
Tonga tao Celtic i Wanyama ho toy ny tsena tsy fantatra. Ny ekipa voalohany dia nirotsaka tao anatin'ny vanim-potoana taonany avy tamin'ny fitondrana 'lehilahy misy vy' izay tokony hanome ny gravitas sasany sy hampatahotra ny mpanohitra.
Nihazona ny tany nihazakazaka i Wanyama ka tafiditra tao amin'ny ekipan'i Celtic izay efa navesatra loatra tamin'ireo mpilatsaka an-tendrony ary nanontany tena ny antony nividianany azy. Nanomboka teo am-piandohana, nandidy ny faritra afovoany izy ary tamin'ny fotoana iray dia nieritreritra ny hiditra amin'ny ligy fanta-daza. Taorian'ny fanombatombanana be dia be sy ny fisarahana teo aloha teo amin'ny lahateny, ny 11 Jolay 2013, Wanyama dia nanao sonia ho an'ny Premier League Southampton ho an'ny saram-piantsoana ho £ 12.5 tapitrisa, ka nahatonga azy ho Keniana voalohany handray anjara amin'ny Ligy Premier. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Fifandraisana amin'ny fiainana
Victor Wanyama dia lehilahy iray tena mino ary mahafantatra ny toerana ahitan'ny fitiavana.
Nankasitrahan'i Kenya manontolo ny fifankatiavan'ny mpampihorohoro midina sy ny modely Kenyana Tracy Macniven. Araka ny mahazatra, ny mpifankatia dia mifanaraka tanteraka amin'ny fifanintsanana.
Tracy dia vehivavy tsara tarehy. Modely ho azy izy "Nywele Creative" izay mikasika ny vokatra volo sy ny fanitarana. Nametraka sary izy teo akaikin'ilay mpilalao baolina kitra mahafinaritra. Ny fanehoan-kevitra izay tonga avy eo dia nametraka tombontsoa hialana sasatra.
Ny fanehoan-kevitr'ireo mpankafy azy dia nahitana iray nanamafy ny fifandraisan'izy ireo nandritra ny herintaona mahery ary ny iray hafa nanentana azy ireo "Efa manambady" nanao hoe: "Ianao ry zalahy dia tahaka ny mpivady mahafinaritra efa herintaona izao!" Fotoana vitsy monja alohan'ny hametrahana an'i Victor.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Fiainana manokana
Victor Wanyanma dia manana ireo toetrany ireo amin'ny toetrany.
Ny tanjon'i Victor Wanyama: Izy dia mahery, maharikoriko, be mpahalala, mahatoky, mampihetsi-po ary mientanentana, mandresy lahatra.
Ny Fahalemen'i Victor Wanyama: Mety ho Moody izy, pessimista ary miahiahy.
Inona no tian'i Victor Wanyama: Tiany ny PlayStation, ny sakafom-bolo, ny fiainana an-trano, golf, fialam-boly any an-trano, miala sasatra na ao anaty rano, manampy ny olon-tiany, sakafo tsara amin'ny namana
Inona no tsy tian'i Wanyama: Ny vahiny, mijery filma, fanakianana ny reniny ary fanehoana ny fiainana manokana
Amin'ny ambangovangony, Wanyama dia tena lalina sy feno fihetseham-po. Afaka miara-miombom-pihetseham-po aminy izy ary mifandray amin'ny olona izay mihazona azy. Wanyama dia tena tsy mivadika amin'ny tanindrazany izay tia azy sy ny zanany.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Fianakaviana
Tsy dia tsara loatra ny ray aman-dreniny tamin'ny voalohany. Niova ny tantarany rehefa nanomboka nanao izany tany Eorôpa ny zanany. Noho izany, lasa fianakaviana fanatanjahan-tena izy ireo. Raha mbola mpilalao baolina matihanina ihany koa ny rahalahin'i Victor McDonald Mariga, ireo rahalahin'i Thomas sy Sylvester Wanyama hafa koa dia mpilalao baolina kitra any amin'ny Ligin'ny Premier Kenyana tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana azy.
Mahagaga, ny rain'i Victor Wanyama, Noah Wanyama (sary etsy ambany), mpilalao baolina kitra ho an'ny AFC Leopards tao amin'ny 1980s. Tsy nanao an'izany mihitsy i Noa tamin'ny baolina kitra.
Nahita lehilahy mahantra i Noa dia nampijaly azy noho ireo mpiasan'ny fiarovam-piadiana nandritra ny naman'i Kenya tamin'ny DR Congo.
SISA SY RENY: Ny rahavavin'i Wanyama dia vao lasa mpilalao basikety matihanina any Etazonia. Wanyama dia tia ny maman-tsipika mipetaka etsy ambany. Heveriny fa ny zavatra tsara indrindra izay efa nitranga taminy nandritra ny androm-piainany manontolo. Ity ambany ity ny sarin'ny renin'i Victor Wanyama sy ny anabaviny.
rahalahiny avy; Noterena noho ny ratra lalim-pahavoazana izay nahavaky be azy tato ho ato, i McDonald Mariga, mpilalao miditra atsy ho atsy Kenya, dia faly erỳ mahita ny fiposahan'ny orinasa Victor Wanyama.
Raha ny mahagaga, raha toa ka nipoitra tsikelikely tao amin'ny baolina italiana ambany ny mariginsan'i Mariga, i Wanyama dia mankafy ny tsara indrindra amin'ny baolina kitra any Angletera. Mariga dia rahalahy iray miahy. Amin'ny teniny momba ny fianakaviany ...
"Tena akaiky ny fianakavianay. Nanafaka anay ny mamanay sy ny dadanay, " Hoy i Mariga. "Naniry izy ireo, hoy izy ireo, 'Manampy aho, ry rahalahiko, be dia be'. Hiara-milalao baolina kitra isika ary aty am-pianarana, Azoko ambara aloha ary miandrasa an'i Victor mba hahafahantsika miverina any an-trano - zavatra toy izany. Indraindray aho hilalao ary hahita olona iray hanapaka ny rahalahiko. Rehefa nitranga izany, Izaho mahatsiaro ho ratsy ary indraindray miady mba hampitsaharana izany ", MAriga dia nanambara tamina tsindrim-peo mahavariana fa ny ankamaroan'ny mpiambina ny rahalahiny dia efa hatramin'izay. Efa folo taona mahery izao no nalain'i Mariga voalohany teo ambany elany i Wanyama.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Adihevitra momba ny arabe
Fotoana vitsy lasa izay, nomem-boninahitra i Wanyama tany Tanzania taorian'ny niorina an-dalambe iray tao Dar es Salaam ny arabe.
Ny hetsika, na izany aza, dia niteraka adihevitra taorian'ny famalian'ny marika nitondra ny anarany.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Misaotra
"Ny fahatsapako azoko taorian'ny tanjona manohitra an'i Barcelona dia tsy mampino! Tsy mbola nahatsapa toy izany aho teo amin'ny fiainako. Tsara kokoa noho ny firaisana. Tsy nankalaza ny fandresena izahay tamin'ny fomba manokana. Nisotro toaka aho, izay tena ampy. "
Wanyama ho an'ny gazety belza Het Nieuwsblad taorian'ny fandresen'i 2-1 v Barcelona (nahatratra ny tanjona) (Nov 2012)
"Nanao fanapahan-kevitra tsara aho hiaraka amin'ny Celtic. Fikambanan'ny fianakaviana izy ireo, izay ahafahako mivoatra amin'ny fomba tsara indrindra. Faly aho amin'ny Celtic. "
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Rage
Victor Wanyama indraindray dia tsy ampy ny faharanitan-tsaina mba hahafantarana raha tsy maintsy manao fanekem-pihavanana mena / mavo izy, indrindra eo amin'ny sehatry ny fifehezana ny hatezerany.
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: Hafatra ho an'ny Keniana Kelyana
Ary nahazo hafatra ho an'ireo ankizy manonofy toy izany koa izy ireo. Hoy izy nanampy: "Ankehitriny dia misy ankizy maro hafa mijery ny Premier League amin'ny fahitalavitra manantena fa mety ho eto izy ireo rehefa mihalehibe. Heveriko fa nametraka ohatra tsara aho ary asehoko fa mety hitranga izany. Rehefa mandeha any aho dia miezaka mamporisika ireo ankizy madinika aho ary milaza azy ireo mba hino sy hiasa mafy mba hahatonga ny nofinofiny hilalao ao amin'ny Ligy Premier dia mety hitranga. Tokony bMitenena ao am-ponao fa misy zavatra azo atao. "
Victor Wanyama Tantara Mitantara Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Biography: A Actor
Tao amin'ny 2015, Wanyama dia nandray anjara tamin'ny famokarana horonantsary fohy momba ny baolina kitra antsoina hoe Kenya Mdudu Boy, nosoratana sy notarihin'ny mpilalao Ella Smith.
Izy koa dia mpilalao vao manomboka amin'ny sarimihetsika fohy "Liona avy any Muthurwa". Ity dia sarimihetsika fanentanam-panahy ao amin'ny diany amin'ny lalao baolina kitra avy any amin'ireo tranobe any amin'ny kianja iraisam-pirenena.
Vao haingana, Wanyama manana dia nandray anjara tamin'ny famokarana sarimihetsika fohy mikasika ny baolina kitra any Kenya antsoina hoe Mdudu Boy, nosoratana sy notarihana mpilalao sarimihetsika Ella Smith.
Nandritra ny fotoanany tao amin'ny Celtic FC, dia nisy fiantraikany tamin'ny Celtic Charity Funds ny Wanyama, fiaraha-miasan'ny Celtic FC izay hitsidika an'i Kenya. Ny fiantrana dia manolo-tena amin'ny fanohanana ny valan'aretina ramie any Afrika.
Ary manantena ny diany avy any ambanivohitr'i Nairobi ho any amin'ny baolina kitra Anglisy ambony dia afaka manentana ankizy hafa.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Victor Wanyama momba ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Felix Oino Novambra 21, 2018 Tamin'ny 2: 21 hariva
Fanamarihana: Wanyama dia mpilalao baolina kitra iray ary mirehareha ny Keniana antsika.Mah Jah Blez Him Raha Manentana antsika Izy Amin'ny Gvng Manome Fanohanana Manohitra ny 2wadz Rchng Him.Congratz Bro Vicky.2ko Nyuma Yako You Mayouthz Wa Kenya.Kp Amin'ny Kutufungulia Njia Wth Tym Tuyon Kenya Ndogo Ktk Mji Wa Uingereza.
Bendict lando Jiona 23, 2019 Tamin'ny 7: 05 hariva
Arahabaina i Wanyama noho ny fahafoizanao ny tenanao ho an'ny tanindrazantsika Wanyama lehibe